Kabaha Badbaadinta Neefta La Bogsado | MR3 by AIRTOX
AIRTOX Kabaha badbaadada MR3
The MR3 style ka Airtox waa Super Charged kabaha wareega oo dhan fudud iyo kabaha badbaadada neefsashada leh.
Habkani waa kii ugu horreeyay Airtox kabaha badbaadada si loo bixiyo waardiyaha cidiyaha kacaanka: WHITELAYER®. Qalabkan ayaa asal ahaan lagu soo saaray Mareykanka iyadoo mashruuc gaar ah u ah askarta caanka ah ee Mareykanka, Navy Seals, kuwaasoo u baahnaa jaakadaha dabka lagu ridi karo gaar ahaan kuwa fudud oo dabacsan.
WHITELAYER® waa mid aad u dabacsan oo isla mar ahaantaana ka xoog badan bir. Isku dhafan WHITELAYER® ciddiyaha ilaalin ee McLaren kaladuwan ayaa culeyskoodu yahay 32 grams waana sidaas oo ay 55% ka khafiifsan tahay qalabka kale ee waardiyaha dharka Sida gunno dheeraad ah, maaddadu waa mid aad u dabacsan, neefsata iyo qoyaan qaadashada.
The MR3 waxay bixisaa raaxo aad u sarreysa oo heer sare ah waana mid aad u jilicsan oo u kulul u adkeysan kara 300 ° C. Sare waxaa leh the PowerBreeze® airflow system, kaas oo gacan ka geysanaya bixinta neefsashada wax ku oolka ah iyo kororka wareegga hawada ee kabaha dhexdeeda. Qaabka ayaa loo neefsan karaa oo waxaa lagula talinayaa oo keliya in lagu isticmaalo aagagga aan u baahnayn adkeysiga biyaha. Dhexdhexaad.
Waxaa lagu heli karaa hal nooc oo midab ah: buluug, madow iyo caddaan ah (midab isku dhafan oo midab leh eeg MR2 or MR4).
Habkani waa kii ugu horreeyay Airtox kabaha badbaadada si loo bixiyo waardiyaha cidiyaha kacaanka: WHITELAYER®. Agabkan ayaa ...
COOL&ME® xakamaynta qoyaanka
Caanood aluminium khafiifa oo aakhirkeedu yahay MI6
Kuleylka hawo u adkaysan kara 300 ° NRT
AIRTOX Kabaha badbaadada MA6 McLaren
AIRTOX Kabaha badbaadada MR4 McLaren